Mora kokoa ve ny miverimbereran'ny PR amin'ny 2016?
Efa mba manontany tena ve ianao hoe inona ny valiny azo raisina ho azonao atao amin'ny fampielezan-kevitra fanentanana anao? Amin'ny teny hoe "lanjany :," tsy midika hoe jiosy mifandray amin'ny tranonao amin'ny alalan'ny rohy ivelany. Miresaka momba ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny endriky ny fidiram-bolanao an-tserasera ianao. Misy tranokala vitsivitsy izay mivarotra rohy ary, avy eo, raha misy ny fangatahana avo dia betsaka ireo izay te-hividy siramamy mifandraika. Andeha hodinihintsika ny fomba ahafahan'ireo hetsika ireo hisy fiantraikany amin'ny ezaka fanatsarana ny fikarohana ataontsika. Amin'ny voalohany, andao aloha hijery akaiky ny rindrambaiko mividy sy mivarotra.
Link ny fividianana sy ny fivarotana
Raha toa ka nanaiky valiny i Backlinks ho toy ny singa boribory, dia ho adidin'ny tontolon'ny aterineto sy ny webmasters.
Ny rohy nividianana boom dia nitranga tamin'ny tapaky ny taona 2000, nanova ny indostria iray manontolo. Tamin'izany fotoana izany dia nitombo ny indostrian'ny fivarotana fivarotana. Ny loharanon-tranonkala sasany dia nanome backlinks amin'ny hofaina. Ny vidin'ny rohy Renault dia nanomboka 30 dolara isam-bolana. Ireo rohy ireo dia natao tamin'ny rohy ankavia.
Taoriana kelin'izay, Google, ary koa ireo motera fikarohana hafa, dia nanomboka nanasazy ireo tranonkala izay nivarotra rohy tamin'ny tranokalan'ny broker na forum. Niteraka fihenam-bidy tao amin'ny tranonkalan'ny orinasa na fanasokajiana ireo sazy ireo.
Na izany aza, na dia ireo sazy goavambe Google aza dia tsy nanakana ny fiverenan'ny fivarotana indostrian'ny fivarotana. Ireo antony mahatonga ny fividianana sy fivarotana bakalorea dia nahita ireo fomba vaovao hanamafisana kokoa ny fitadiavana ny fitaovam-pikarohana.
Araka ny toro-lalana Google, ny fividianana na fivarotana rindran-kivana izay mandalo PageRank dia manaiky ho fanitsakitsahana fitsipika henjana. Raha fantatrao amin'ny fividianana rohy hanatsarana ny fikajiana ny habaka, ny site dia mety hahazo sazy amin'ny Google. Izany no antony, raha toa ianao ka manao ireo asa ireo, dia mila mahatsapa ny loza mety hitranga.
Buying and selling backlinks in 2016
To find websites that provide Alefaso amin'ny votoatiny karama ao amin'ny pejiny izy ireo, mila mampiditra fikarohana "fividianana vahiny" ianao ao anaty boaty fikarohana Google. Ny sasantsasany amin'ireny serivisy ireny dia hanome anao ny asam-panompoana amin'ny maha-rohim-pahefana sy ny fametrahana araka izany. Na izany aza, misy ihany koa ireo tranonkala serivisy mendrika amin'ny vidiny sarobidy. Misy soso-kevitra sasantsasany amin'ireo lahatsoratra an-kalamanjana avo lenta ho valiny ho an'ny backlink. Amin'ity tranga ity dia manaiky ny hiara-miasa ho an'ny fahalalahana ny antoko.
Fividianana rohy avy amin'ny mpitoraka blaogy
Maro ny backlinks amin'ny 2016 no noforonin'ny rindrambaiko tsy miankina amin'ny bilaogera. Ireo rohy ireo dia tsy azo tsidihina amin'ny milina fikarohana ary zara raha misy olana. Maro ireo mpitoraka blaogy no mahalala ny sandan'ny rindran-damina ary mitaky vola amin'ny rohy tsirairay napetrany. Ankoatra izay, ilaina ny manamarika fa ny mpitoraka bilaogy sasany dia manaiky ny hametraka lahatsoratra miaraka amin'ny rohy mandritra ny iray na roa andro monja. Ny ampaham-bolongana lehibe indrindra amin'ny blôgy izay mivarotra rindran-damina dia napetraka ao anatin'ireto tsenam-barotra manaraka ireto: lamaody, trano, fitsangantsanganana, bola, fanabeazana, fanatanjahantena. Ny vidin'ny fividianana rindrambaiko avo lenta amin'ny 2016 dia 300 dolara amin'ny loharanom-baovaon'ny serivisy mahazatra, ary mihoatra ny $ 3000 eo amin'ny sehatra malaza malaza Source .